“Lalao Afrikanina ho an’ny tanora” (JAJ 2018): hiankina amin’ny vola ny ho isan’ny atleta | NewsMada
“Lalao Afrikanina ho an’ny tanora” (JAJ 2018): hiankina amin’ny vola ny ho isan’ny atleta
Maniry ny handefa delegasiona goavana any amin’ny andiany fahatelo amin’ny “Lalao afrikanina ho an’ny tanora” (JAJ 2018), hotanterahina any Alzeria, ny 19 ka hatramin’ny 28 jolay ho avy izao, ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena malagasy. Etsy ankilany anefa, tsy manana vola hoentina miatrika izany ny departemanta iandraiketany.
Efa noresahin’ny minisitra, i Tsihoara Faratiana Eugène, nandritra ny filankevitry ny governemanta, izany olana izany, indrindra fa tamin’ny minisitry ny Tetibola. Araka izany, mbola hiankina amin’ny vola eo am-pelatanana izany ny ho isan’ny atleta handrafitra ny delegasiona malagasy any amin’izany fihaonana izany.
Mety ho marika fotsiny izany ny ho fandraisan’i Madagasikara anjara amin’ity “Lalao afrikanina ho an’ny tanora” ity. Raha tsiahivina, hanana ny lanjany io fihaonana kaontinantaly io satria hiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Lalao olympika ho an’ny tanora” (JOJ 2018), hatao any Buenos Aires, Arzantina, ny 6 ka hatramin’ny 18 oktobra ho avy izao. Tsy mbola hay ihany koa izay ho isan’ny taranja hifaninanana. Tany am-boalohany, 12 izany, saingy nahena ho valo indray 12 andro mialoha ny lalao. Mbola hifampiresahana amin’ny komity olympika sy ny federasiona izay ho taranja handraisana anjara.